Warshad Kaamamka Kaamamka - Shiinaha Kaamamka Alaabada Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Markaad u maleyneyso inaad u baahan tahay oo kaliya teendho iyo shoolad kaam lagu seexdo si aad banaanka u degto, maya, maya, qalabka kaambeynta ayaa muhiim u ah safarkaaga banaanka kaamil ah, ku habboon oo la iloobi karo. Shirkadeena Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. iyo soosaarida shooladaha xaabada lagu gubo iyo kaamamka dibedda kaabayaasha, kuwaas oo isku daraya naqshadeynta, cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga
- Ku isticmaal jaakadaha wax lagu kariyo ee jira ama markii aad ku rakibayso jaakada shooladaha teendhada ama hoyga, xalka fudud ee ah daaqida daloolka dhex mara teendhada shiraaca
- Lagu sameeyay silikoon si looga hortago heerkulka sare, waxay abuurtaa shaabad adag oo hareeraha tuubada, waxayna siisaa dabacsanaan
- Waxaa lagu heli karaa 2 nooc oo lagu calaamadeeyay cabbirro si loogu oggolaado qiyaasid fudud, oo ku habboon munaasabado kala duwan
- Fargallada birta ah ee birta ah iyo looska hexku meel ayey ku hayaan Qalabka Flashing-ka
- U adkaysiga shucaaca ultraviolet, dildilaaca & cimilada
Wareegtada Wareegtada Wareegga Wareegtada Shimbiga
- Hawo qabow ka fogee: Waxaa loo sameeyay si loo xiro qiiqa dabka marka 'in laguu ordo, si hawo qabow u banaanka u noqoto oo gurigaagu u ahaado mid diirran.
- U dir qiiqa: Way fiicantahay in hawo qabow banaanka la dhigo oo waliba si sahal ah loo furi karo si qiiqa xun uu uga baxsado.
- Ka caawi gacan ku haynta xoogga dabkaaga: Haddii aad doonaysid in dabkaagu uu gubto waqti dheer oo xoog badan ama mid cimri-gaaban iyo jaallaha ah, adiga ayaa kantaroolaya xaaladda.
- Xakamaynta hawada: Waxay ku habboon tahay shooladaha la qaadi karo ee kaamamka ah, hagaajinta socodka hawada iyo heerka gubashada ee shooladdaada.
- Adeeg waara: Qiiqa hawo-bixiyaha wuxuu ka kooban yahay saxan bir ah oo leh heer-kul sare oo daahan u adkaysta, ku habboon jawiga dibadda ee adag.
- Lagu calaamadeeyay cabbirro si loogu oggolaado qiyaasid fudud, oo ku habboon munaasabado kala duwan
- Ku habboon Moodooyinka makiinadaha: S03-1, S03-2, S03-3, S03-4, FO-05, FO-07, iwm.
- Caado La Waarayo: Ka samaysan dhar waara iyo dahaarka u adkaysta cimilada, waxay difaac u tahay shooladda aad gubto.
- Naqshadeynta jeebabka badan: Waxaa lagu qalabeeyaa 2 boorso xarig si ay si fudud ugu qaaddo shidaalka dheeriga ah, sidoo kale waxay la socotaa jeebado gudaha ah oo loogu talagalay qalabka.
- Baahiyahaaga Kaydinta: U isticmaal bacdan qaadashada wax ku oolka ah si aad ugu keydiso oo aad u ilaaliso shooladdaada, oo ay u fududahay in la qaado.
- Dammaanad Tayo: 100% qanacsanaantaadu waxay marwalba ahayd mudnaantayada koowaad. Maheli doontid badeecad adkaysi badan.
Maro Dab-Dabacsan oo Dab-damis Loogu Tala Galay
- Tayo Sare: Waxaa laga sameeyay hal lakab oo ah fiber galaas iyo labo lakab oo daahan silikoon ah. Labaduba waa Kuleyl adkaysi u Leh iyo Maaddad aan Guban karin, oo leh caabbinta dabka oo aad u saraysa, hawl ka hortagga faafidda.
- Codsiga: Oo lagu rido godka dabka ama solayda, waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa qarxinta qarxinta ama dufanka ka soo daadanaya inay waxyeeleeyaan alwaaxa, sagxadda dhulka, cawska, iyo dusha sare ee hareeraha godka dabka ama dabka.
- Ammaan ah in la isticmaalo：Lakabka silikoon ee heerkiisu yahay ma aha oo kaliya inuu leeyahay shaqada dabka iyo kuleylka kuleylka, laakiin wuxuu kaloo ka hortagaa saliida inay dhulka gasho.
- Dejinta: 4 birta birta ah ee birta ah ee birta ah waxaa loogu talagalay inay gogosha ku hagaajiso xaaladaha dabaysha oo xoog leh.
- DIGNIIN: Ka fogee masaafo dhan 10 inji inta u dhexeysa derinkiisa iyo gunta dabka.
Xarig Bixiyayaal bir ah oo loo yaqaan 'Chimney'
- La jaan qaadi kara shooladaheena xerada
- Waxaa laga sameeyey 304 bir bir ah
- dhexroor 60 mm, 300 mm dherer
- Qodobbada ku xirnaanta khadadka nin
- Ka hortag dhimbilo duulaya
304 ahama BBQ Grill
- Xasiloon oo la qaadan karo: Waxyaabaha tayada sare leh ayaa ka dhigaya waxyaabaha dibedda lagu dubo ee sigaar cabaya inay leeyihiin awood xamuul oo xambaarsan.
- Adeeg waara: Ka samaysan xoog iyo adkeysi 304 shabag ah oo aan lahayn, adkeysi u leh kaamaynta bannaanka iyo socodka.
- Si Fudud loo Nadiifiyo: 304 ahama oo bir ah waxay ka caawisaa shiilku inuu iska caabiyo qiijiinta iyo daxalka. Kaliya ulaha ku tirtir shukumaan oo gadaal ugu laabo tubbada qaadda ee habboon.
- Kulan la'aan, aad u habboon.
- Cabbir yar: Way fududahay in lagu keydiyo boorsadaada.
- Si Fudud Isu Urursiga: Ilaa iyo inta ulaha ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya ee lagu duubay lagu rakibayo kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ah, ulaha dhexe waa kuwo aamin ah mana dhaqaaqi doonaan
Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Foornada Cuntada lagu karsado, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, shooladda birta ah ee birta ah, Teendhada Qoryaha Teendhada, Kaam Dabka Gubay,